लिलावल्दव दाहाल (काका), पूर्व कोषाध्यक्ष, ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोििशयसन अफ नेपाल (टान)
Lila Baldab Dahal interview about Taan Lila Baldab Dahal interview about Taan
Lila Baldab Dahal interview about Taan
ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोशियसन अफ नेपाल टानको ४१ औं वार्षिक साधारणसभाको मिति घोषणा भएसंगै व्यवसायीहरु विच आगामी नेतृत्वमा पुग्न दौडधुप सुरु भईसकेको छ । तर अधिकांश व्यवसायीहरु भने टानमा देखिएको गतिरोधको समस्या समाधान हुन नसक्ने हो भने जो नेतृत्वमा पुगेपनि खासै अन्तर नहुने मानसिकतामा छन । यसै सन्दर्भमा अर्थ र व्यापारले नेपालको पदयात्रा पर्यटन क्षेत्रका विद्यमान समस्या, टानमा देखिएको गतिरोध, आर्थिक विषयवस्तु तथा समाधानका उपायहरुवारे टानका पूर्व कोषाध्यक्ष लिलावल्दव दाहाल (काका) संग कुराकानी गरेको छ । आर्थिक विषयवस्तुमा विशेष दक्षता राख्ने दाहाल भुटान ईन्टरनेशनल ट्रेक्स प्रा.लि.का प्रबन्ध निर्देशक समेत हुन । प्रस्तुत छ–टानका पूर्व कोषाध्यक्ष दाहालसंगको कुराकानीको सम्पादीत अंश :
० तपाईं टानको पूर्व कोषाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा पदयात्रा पर्यटन व्यवसाय संकटोन्मुख हुँदै गएको र टानमा थप गतिरोध देखिईरहेको आम व्यवसायीहरुको धारणा छ । यो परिपे्रक्ष्यमा टानमा आगामी नेतृत्व कस्तो आउनुपर्छ ?
० टानमा देखिएको गतिरोधका पछाडी टानको आर्थिक विषयवस्तु समेत रहेको छ । टिम्सको विषयले मात्र टानमा गतिरोध आएको हो त ?
० तपाईंले टानको कोषाध्यक्षको पदमा रहेर समेत कार्य गरिसक्नुभएको छ । टानको वर्षौंदेखिको बेरुजु तथा आर्थिक अनियमितता पनि टान गतिरोधका मुख्य कारण होईन ?
० प्रसंग बदलौं, नितिगत रुपमा आजको दिनमा पदयात्रा पर्यटन व्यवसायका खास समस्याहरु के हुन ? त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ?
० व्यवसायिक संस्थाहरु त सरकारसंग सहकार्य गरेर नितिगत सुधार गर्दै जानुपर्नेमा टान केहि वर्षदेखि सरकारको प्रतिपक्षको रुपमा रहेजस्तो देखिन्छ, किन ?
० टानलाई केहि सिमित ठूला व्यवसायीहरुको लाखौंको कर छुटका लागी लविईङमा मात्र प्रयोग गरियो भन्ने पनि व्यवसायीहरुको गुनासो छ नी ?
० अन्त्यमा टानप्रति आम व्यवसायीको मोहभंग नै भएजस्तो देखिन्छ । यो परिस्थति किन आयो ?